“Bukaanka Soomaalida lama tixgaliyo” | Somaliska
“Bukaanka Soomaalida lama tixgaliyo”
Dhaqtar mudo dheer ka soo shaqeeyay hospitaal ku yaala magaalada Göteborg ayaa soo saaray cilmi baaris uu ka diyaariyay isfahandarada kala haysata dhaqaatiirta Swedishka iyo bukaanka Soomaalida ah.
Dhaqtarkaan oo wareysiyo badan ka qaaday Soomaalida iyo dhaqaatiir Swedish ah ayaa sheegay in dadka Soomaalida ah ay dareemayaan in aysan tixgalin ka helin dhaqaatiirta Sweden. Dhinaca kale dhaqaatiirta Sweden ayaan fahansaneyn sida loo dabiibo Soomaalida oo inta badan aan hadal rabin balse doonaya in uu dhaqtarku garto halka laga haayo.
“Waxaa jira dad aan luuqada si fiican ugu hadlayn, inta badan waa kuwo aan tixgalin la siin oo aan helin warbixin ku filan. Waxaa yar fursada in dhaqtarka iyo bukaanku ay qorsheyn wada sameeyaan. Natiijada ayaa ah isfahandaro iyo in dadku ay dhaqaatiir wadamo kale u raadsadaan” Ayuu qoray Kristian Svenberg .
Dhaqaatiirta uu wareysiga ka qaaday ayaa ah kuwo aan fahansaneyn sidii loo xalin lahaa dhibaatada Soomaalida. Dhaqaatiirta ayaa dhibaato ka haysataa in ay fasirtaan waxyaabaha ay Soomaalidu u sheegayaan. Soomaalida qaasatan waayeelka ayaa ah kuwo dhaqtarka hawl hufan ka sugaya. Ma doonayaan in suaalo la waydiiyo balse waxay doonayaan in dhaqtarku uu caawimaad sameeyo.
“Waxa uu bukaanku dhahayaa halkaan ayaa i xanuuneysa, iyo halkaas balse ma muuqdaan wax uu dhaqtarku baaritaan ku sameyn karo. Waa wax uu fahmi karo dhaqtarku marka uu bukaanka mudo yaqaanay balse kulamada aan joogtada ahayn macquul ma ahan in uu dhaqtarku fahmo xanuunka haya bukaanka” ayuu yiri Sven Berg.
Sven ayaa aaminsan halkaas in arintu ay ka qaldantahay maadaama bukaanku uu markasta la kulmo dhaqtar ka duwan kii hore. Waxa uu filayaa in qoraalka uu ka sameeyay arintaan in uu toosh ku daari doono xaalada, isla markaana uu wax ka badali doono jawiga. 16 December ayuu cilmi baaristiisa ka soo jeedin doonaa jaamacada Göteborg.
WQ: Sveriges Radio
Imisa qaxooti ah ayaa Sweden soo galaya sanadkaan?
Migrationsverket oo shaqaalaynaysa 1000 qof
December 7, 2011 at 17:43
Talada Sven waa wax fiican anniga aragtideyda waxaana fiicnaan lahayd inuu qofku leeyahay dhakhtar isaga u gaara oo haya feylkiisa kana dheehan kara wax alla iyo waxii uu horey uga daweeyay iyo waxa kusoo kordhay bukaankiisa. Waana ka jirtaa wadamo badan oo dunida ah in qofku uu yeesho dhakhtar u gaara.
December 7, 2011 at 18:26
khadija waxan filayaa dhaqtar kasta wuu ogyahay qofka daawoyinka uu qatay ama inta jeer uu dhaqtar la kulmay madama maclumaadkaas dhan ay ku keydsanyihin personnummer-ka qofka,marka waxa kali ah oo kala duwan waa qaab wax looga daweyo sweden iyo kan wadankeena.
December 7, 2011 at 21:48
Haddan ku darsado aragtiyada gaaban waay jirtaa is fahan la,aan ka dhacada xaga luuqad balse waxa jirta dhibaatooyin badan aaysan somalidu fahansyn taas oo ah hadday xanuusadan waxay raban markiiba in la qabilo aay la kulma dhaqatar tasna macquul ma ahan waayo dad ba ka so horeyay balanka . waxa kale oo haddana jirta qofka xanuunada haya wuu ka xishooda ma sheegan maalin ba gabdh waxay lahayd babasir waxay tidhi dhaqatar ban la balasanahay haduu nin noqodo isma qawinayo marka wa su’aale maxay iska dawaynaysa ? tan kale waxay la kulmayan dhaqatarka calosha waxay dhaahayan waxa i xanuunaya lafaha ma oga miya dadkeenu in dhaqtar kasta wax u gaara uu ku taququsay waxa la raba in marka balanka samaysanyo aad u sharaxda meesha ku xanuunaysa ama aad qabsta tolka wana lacag la,aan wax na cusuriyeya ma jiran ee aan dadka si fiicaan ula dhaqano sxbyaal
December 8, 2011 at 10:01
hadaan kudarsado figradayda waa waxjiro indhibaato nagala soodaristo habka ay waxumamulaan dhaqatiirta dalkaanayto anagana waxaan fahmilanahay sida ay waxusoconayaan sabtawaxaawaaye dhaqatirtaan waxay isticmaalan wax aan isdhahay waa siyaasad cafimaad waxyabaaha aad rabtid inay kuu cadeeyaan makuu cadeenayaan korkoray kaga taatabanayaan mida kale safafka loogu jiro cafimadka sida qaliimada waa dheryahay ilaa ad kadalayso magaranayo sabbta lkn anaga bes mahan xataa dadka aan martida unahay xataa waqaylinayaan
uma hibaaq says:
December 8, 2011 at 14:04
asc dhamaan bahda somaliska salan kadibhadaan ka dhiibto fikirkayga waxan aaminsanahay cunsuri majiro aan somali ahayn !cunsuriga lasheego waa somali waayo waxan imaanay qurbo dadkaaga maha dadkaaga maha waxaa lagaa doonaya inaad bulshada aad u timid aad dhaxgashaa oo ay ku fahmaan adna fahantaa.waa suaal sidee ku fahmi ama kugu fahmayaan umada aad utimid oo aad rabtid inaad la noolaatid hadaadan luqadii baran ooaadan dhexgalin adigo dhaqankaga ilaalinaya iyo diintaada haku arkaan inaad tahay qof si walbaa u fahmaya waayo ayag kuma garanayaan luqada taas ayaad uga fiican tahay .marka somaliyey waa isnaqaan cunsurinimada hala joojiyo oo meeshaad tagtaan wax la qeybsada .dhibka kale ee nahaystaa kii naga fahmanaa wuxuu fahmaa inta xun!marka waa inaan badownimada iska saarnaa somalay
umu ilhaam says:
December 8, 2011 at 20:28
asc waxaan salaamayaa jimcaale iyo dhamaan somaalida oo dhan waxaan aad uga xumahay mugdiga nagu habsaday hadaan soomali nahay ee dhan walbaa waayo xitaa cisbitaalaadaka sida qaalibkaa kuma haysano wax tix galina waayo meel walboo aan sheegno inay na xanuunayso caadiyan waxayba na dhahaan biyo cab ,horta waa mide wadankeeni biyo laani kama jirin ee ma biyaha swiden baa daawo ku jirtaa mise bahdilka soomaalidaaba intaas gaaray ilaahay hanaga soo gaaro hadaan nahay umada soomaaliyeed ee islaamkaa
December 11, 2011 at 21:20
Is af garanshawaaga waxa keenay qofki oo afki aan garanen oo turjumaan isku halenaya aan saani oo gudbin karin qofka xanuunsaneya cabashadiisa.Ta labaad dhakhatiirta waxa ka dhaadhacsan inay qaxootigu dawo jecel yehiin, taana waxba ka jira.Soomalida marka la dhaho is baxnaaniy oo cunto fiican iyo exercise samee waxay moodeyan inu dhakhtarku caawin.Daawdo wax ay ku geysato mooye waxba kugu kordhin mayso.Qofna inu ku degdego maha arintaado serious mooye.